CURRANT: DARYEELKA SAXDA AH EE DAYRTA IYO DIYAARINTA JIILAALKA - CURRANT
Sida loo daryeelo currants, iyo sida loo diyaariyo duurka qaboobaha
Currant waa berri udgoon oo udgoon leh, taas oo kaliya degane xagaaga naadir iyo ninkii beerta ka shaqaynayay oo aan kobcin. Miraha of currants iyo casaan, kuwaas oo loo isticmaalo cuntada ee foomka cayriin ceeriin, qalajiyey iyo heerkulka dabiiciga ah, waa il wanaagsan oo fiitamiin ah iyo walxo kale oo waxtar leh ee jirka aadanaha. Caleemaha dhirta waxaa kale oo ay hodan ku yihiin macdanta, waxaana loo isticmaalaa in la shaandho shaaha, sida dhir udoonida ilaalinta. Kordhay currants on aad sawir aad u fudud, laakiin beeraha beerta, sida dad badan oo kale, waxay sidoo kale u baahan tahay daryeel joogto ah. Aan fiirino sida ugu dhow ee loo ilaaliyo xilliga dayrta.
Sababta sababta daryeel gaar ah waa muhiim
Danta ugu weyn ee korriin kasta oo currant waa beergooyska wanaagsan ee sannadlaha ah ee ballaaran, dhadhan fiican leh. Si ay u gaaraan fruiting badan, waxaa lagama maarmaan ah in la daryeelo dhirta ma aha oo kaliya guga, laakiin sidoo kale xilliga dayrta, maadaama badan oo la qabto ka dib markii xagaaga si toos ah u saameeyaan goosashada mustaqbalka.
Dhaqdhaqaaqa hawlaha xannaanooyinka daba-galka xilliga dayrta waxaa loogu talagalay in lagu saleeyo qoyaan ku filan ciidda iyo helitaanka oksijiinta ee nidaamka asaasiga ah, iyo sidoo kale hagaajinta iyo dib usoo noolaynta geedka, diyaarinta jiilaalka.
Ma taqaanaa? Noocyada ugu caansan ee currants waa madow, casaan iyo caddaan, in kastoo xaqiiqda ay ka badan yihiin: waxaa jira noocyo kala duwan oo ah orange, purple, yellow iyo cagaaran oo ah berrigan.
Miraha, ubaxa iyo caleemaha madow, casaan iyo caddaan ah ayaa bogsiinaya guryaha waxaana inta badan loo isticmaalaa daawada dhaqameed.
Sida loo diyaariyo currants jiilaalka: xeerarka daryeelka
Xilliga dayrta, currants waxay u baahan yihiin taxaddar iyo dadaallo meelaha soo socda:
Xooga iyo waraabinta ciidda.
La dagaallanka cudurada iyo cayayaanka.
Cusbooneysii oo beddel dhirta hore.
Digidda iyo dharka.
Daweynta duurka iyo carrada laga bilaabo cudurrada fangas iyo xakamaynta cayayaanka
Saameynta xun ee cudurada fungal iyo cayayaanka ayaa badanaa keena oo keliya in dhalidda yar ee warshadda, laakiin xitaa dhimasho dhan baadiyaha, sidaas darteed daaqada ee daaqada waa in lagu hor tilmaantaa xaaladda caafimaadka ee currants. Kormeer dhammaystiran ee dhirta ayaa u ogolaan doona wakhti si loo ogaado khatarta oo si wax ku ool ah u baabi'iyo.
Cudurada ugu badan ee fangasku waa:
(miraha iyo gobollada);
Macmacaanka saboolka ah ee digaagga
Waxaan kugula talineynaa inaad baratid sida loola tacaalo cudurrada iyo cayayaanka ee currants: dufanka dhalada, xayrta maqaarka, dhibco cas oo caleemo, gaashaan, caarada burcad.
Tallaabada kowaad iyo kan ugu muhiimsan ee lagu ogaanayo cudurku waa ciribtirka caleemaha cudurada iyo caleemaha, kaas oo loo baahan yahay in la gubo si looga hortago in cudurku sii faafo. Ka dib, in dhirta waxaa lagu daaweyn karaa fungicides ku habboon (xalka nitraphine, dareeraha bordeaux, amooniyam nitrate, ash soodhaha).
Cayayaanka ugu caansan ee si farxad leh u degaan duurka currant waa: Caarada burooyinkeeda, sawflies iyo sanduuq muraayad. Xilliga dayrta, si ay ula dagaallamaan, waxay inta badan ku filan tahay in la burburiyo qaybaha cudurka qaba ee geedka, oo ay ku xigto qulqulka ciidda ku wareegsan.
Ma taqaanaa? Markii hore, currant loo yaqaan sida "miraha dabiiciga ah", dhammaantood waxaa lagu koray ku dhowaad dhammaan macbudka.
Manjada lacagtu waa ujeeddadeeda si ay u hesho waxtarka ugu fiican. Waxaa la soo saari karaa guga horraanta, laakiin kiiskan waxaa jira halis ah in la waayo xilligii guntinta, iyo ka dib xilliga dayrta, dhirta uma baahna inay ku kordhiso xoogaaga koritaanka laamaha u baahan in laga saaro guga. Intaa waxaa dheer, xilliga dayrta, bannaanka uqorshuhu wuxuu caadiyan haystaa waqti dheeri ah si uu u sameeyo manjooyin, si tartiib tartiib ah oo aan lagu mashquulin isagoo abuuraya shaqo.
Baro sida loo saxo currants.
Duurka dhalinyarada waa la jaraa oo leh nadaafad nadiif ah, iyo kuwa duugoobay - dib u noolaansho. Si loo hirgeliyo manjooyin waxay u baahan yihiin foorno fiiqan ama faylka beerta.
Maxaa ku xiran manjooyin:
laamaha ay saameeyeen cudurada fangas ama cayayaanka;
jir ah (seddex ama shan sano) oo laamood oo daciif ah;
Caleemaha koraya oo gaabinaya dhirta;
oo laamihiisa jiifsaday;
laamo jaban oo daciif ah, oo siinaya caleemo darbi.
Waa muhiim! Dheecaannada madow waa la gooyaa ka dib goosashada, iyo noocyo kale ayaa la gooyaa karaa xilliga dayrta dabayaaqada xilliga nasashada.
Si aad u dhaqaajiso caleemaha yar yar, laamaha jir ah ayaa la gooyaa ciidda. Cinjirrada laamaha waaweyn waa in marwalba lagu daweeyo beerta beerta. Si aad u cusbooneysiiso baadiyaha, waxaa lagula talinayaa in lagu lafaguro saddex sano, sannad walba waxay ka saareen saddex meelood oo laanta. Marka la eego natiijada manjooyin, afar labbo sanno iyo saddex sano ah waa in la tagaa, iyo sidoo kale caleemo toddoba sano ah. Qaabkaasna wuxuu u soo baxayaa inuu abuuro baadiyaha currant ku fiican.
Lafaha kala duwan ee leh dhalidda wanaagsan ayaa la gooyaa haddii ay ka badanyihiin 25 cm oo dherer ah, iyo noocyo oo leh qaabka daciifnimada oo daciif ah, kaliya dhalooyinka aan qaan gaarin oo leh burooyinkeeda daciifka ah ayaa la gooyey. Buundada casaan iyo caddaan caddaan ah ayaa lagu sameeyaa qaab koob ah, dhererkeeduna waa 1m.
Inta lagu jiro gu'ga iyo xagaaga, taas oo lagu garto koritaanka xooggan ee caleemaha, ubax iyo fruiting, qiimaha nafaqada ee ciidda ka yar duurka ayaa si weyn loo yareeyey. Si loo hubiyo in goosashada wanaagsan ee sanadka soo socda ee dayrta, waxaa lagama maarmaan ah in ay bacrimiyaan currants.
Baro waxa iyo sida loo maamulo currants xilliga deyrta ka dib.
Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dhirta sii koraya hal meel dhowr sano. Xulashada ugu wanaagsan ee quudinta waa isticmaalka isku mar ee Bacriminta organic iyo macdanta.
Wixii quudinta hal baadiyaha ah baaldi ee digada qudhuntu ku dar 100-150 g of superphosphate iyo 30-40 g of chloride potassium. Ka dibna isku dar ah ayaa si siman u kala firirsan agagaarka geedka isla markaana qoday (wax yar ka yar baadiyaha, iyo qoto dheer oo ka baxsan taajkii).
Waa muhiim! Bacriminta Nitrogan si ay u quudiyaan currants xilliga dayrta waa in aan loo isticmaalin, sababtoo ah waxay kiciyeen koritaanka caleemaha yar yar, taas oo si xun u saameeya caabbinta barafka geedka.
Qallajin iyo beerid
Faa'iidooyinka mulching carrada waa ay adag tahay in ay ka badan. Lakabka lafaha ayaa bixiya nidaamka asaasiga ah ee warshadda leh xaaladaha ugu wanaagsan ee horumarinta: nuugista nafaqooyinka, ilaalinta qoyaanka iyo xaalad dabacsan ee ciidda, oggolaanshaha xididada "neefta."
Ka hor xilliga dayrta mulching, ciidda ka yar duurka currant iyo inta u dhaxaysa saf ah waa in la qodaa ilaa leh kaydka kaydka si qoto dheer ah 15 cm. Isla mar ahaantaana, si toos ah hoostiisa hoostiisa, waxaa lagama maarmaan ah in la geliyo majarafad iyada oo ujeeda iyo qodo ma qoto dheer 8 cm si aan u waxyeeleynin nidaamka xididka. Ma aha lagama maarmaan in la jebiyo lakabyada dhulka in qoyaanku si fiican u yaraayeen carrada.
Haddii dayrta ay qalalan tahay, ka hor inta aaney bilaabmin cimilada qaboobaha, waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo warshad prewinter prewinter, sababta oo ah currants aad u dareen badan la'aanta qoyaanka. Si arrintan loo sameeyo, baadiyaha waxaa si ba'an u waraabiyey (laga bilaabo saddex ilaa shan baaldiyo oo biyo ah), qodaya ciidda si qoto dheer ah 50 cm.
Fasallada ugu fiican ee currant ee goobtaada.
Ka dib markii la qodo iyo waraabiyo, dhulka ku wareegsan baadiyaha oo leh qiyaas ah 60 cm waa la mulched leh peat ama isku dar ah dhadday leh dhalooyinka qoryaha qoryaha. Lakabka mulch ee waxtarka ugu fiican waa inay ahaadaan ugu yaraan 5 cm qaro weyn. Mugdi leh dhadday
Ku dabajiridda duurka qabowga
Caadi ahaan, currant ayaa iska leh dalagyada beeraha jiilaalka-adag oo u adkeysan kara heerkulka hoos u -25 ° C iyada oo aan la duubin dheeraad ah. Tani waa run loogu talagalay noocyada maxalliga ah ee horeba loogu habeeyey xaaladaha cimilada ee gobolkooda. Noocyada taranta Yurub uma dulqaadan karo jiilaalka Siberia iyo meelaha kale ee waqooyiga, ama xitaa u dhintaan. Sidaa darteed, meelaha leh dhaxan jiilaalka adag, fiiro gaar ah waa in weli la bixiyo si ay u duubaan ay duurka.
Hoyga ugu wanaagsan ee loogu talagalay currants iyo dhirta kale waa baraf. Laga bilaabo barafka ugu horeeya waxaad u baahan tahay inaad bilowdo barafka ilaa uu duurka si buuxda u daboolo jaakad baraf ah. Si kastaba ha ahaatee, si aysan laamaha u jebin miisaankii hore ee barafka, waxaa lagu talinayaa in si taxadar leh loogu darso dhulka hore, iyaga oo xoqaya lebbiska ama faybarka, ama ku xir xargaha, adoo siinaya qaab alwaax. Meelaha ay jiilaalku yihiin kuwo barafoobay laakiin baraf la'aan, currants waxaa lagu duuduubi karaa cirbadaha, qalabka gaarka ah ee wax lagu daboolo, sawirro, bustayaal duug ah, iwm.
Waa muhiim! Waa suurtagal in la duubo duurka currant ee polyetylen iyo qalab kale oo aan u oggolaan hawada in ay dhex maraan.
Ka dib markii kulaylka koowaad ee ilkaha, daboolida maqaarka waa in laga saaraa si ay currants u sii deyn karaan burooyinkeeda waqti. Haddii aad ka baxdo duurka ku yaal waddan lagu xanaaneeyo, koriinka daaqsinka dabiiciga ah ee geedka ayaa la gooyaa, taas oo saameyn xun ku yeelan doonta dalagga. Cirbadaha duurka ku jira
Maxaa aanad samayn: khaladaadka caadiga ah ee bannaanka u janjeersaday
Currant waxaa loo tixgeliyaa in uu yahay geed beerta oo aan qabyo ahayn oo dhul bacrin ah xaaladaha cimilada wanaagsan oo ay ku guulaysan karto miraha wakhti dheer, laakiin ugu yaraan dareen yar oo ka timid beerta ayaa weli loo baahan yahay geedkan. Aynu tixgelinno waxa khaladka ah ee bannaanka u janjeeri kartaa dhaawici kartaa currants:
Waraabinta khaldan. Inta badan bannaanka aan la taqalusi karin biyaha dhirta caleemaha kor ku xusan ama isticmaal biyo aad u qabow oo ka soo jeeda biyo-biyoodka. Ku waraabinta currants, sida dhirta kale, waa inay ahaataa xididka, iyadoo la isticmaalayo biyo heerkulbeeg.
Xoog culustaasoo dhaawici karta nidaamka xididka.
Gubashada laanta halkii ay ku miiri lahaayeen manjooyin waxay keeneysaa walwal dheeraad ah geedka, taas oo yaraynaysa caabbinta barafka.
Dharka ugu sareeya ee digada cusub xilliga dayrta wuxuu kor u qaadaa koritaanka firfircoon ee warshadda wuxuuna ka dhigaa mid u nugul qabowga. Xilliga dayrta sida bacriminta, waxaad isticmaali kartaa oo kaliya digada qudhuntay.
Geedi hoyga qalabka aan la isticmaalinma neefsan karo.
Xoqitaanka qaldan. Manjooyin xad-dhaaf ah ama aan ku filneyn, iyo sidoo kale caleemaha jiran iyo daciif ah, waxay yeelan karaan saameyn xun oo ku saabsan xaaladda geedka.
Dayactirka ee ay duurka hore. Iyada oo da'da, duurka waxay bilaabaan in ay miro yar yar ku qaataan, halka gooyo iyo dib-u-habeyn ay xaqiijin karaan wax soosaarka sanadlaha ah ee xasilloon. Xaaladdan oo kale, currants madow waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin laamo waaweyn oo da'doodu ka weyntahay saddex sano jir, halka laanta guduudan iyo kuwa cadaana loo oggol yahay inay ka tagaan laanta lixda sano ah ee taajka.
U hoggaansanaanta talooyinkan sahlan waxay kuu oggolaaneysaa inaad kobciso duurka udub oo si fiican uga faa'iideysan doona caafimaadkaaga sanad walba, oo kuu keenaya miro leh oo caafimaad leh.
Video: Daryeelka Lacagta ee Deyrta